ကွမ်တမ်နံပါတ်များ၊ ၎င်းတို့သည်အဘယ်နည်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဥပမာများ - UniProyecta
Niels Bohr ၏အက်တမ်ပုံစံအရအက်တမ်တစ်ခု၏ပရိုတွန်များနှင့်နျူထရွန်များသည်နျူကလိယအတွင်း၌ရှိကြသည်။ အီလက်ထရွန်ဘယ်မှာလဲဆိုတာအတိအကျမသိနိုင်ပေမယ့်အဏုမြူဗုံးပတ်လမ်းကတွေ့ရှိနိုင်ခြေများတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့အဲဒီပတ်လမ်းတွေကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်မလဲ။ အလွန်ရိုးရှင်းသောကွမ်တမ်နံပါတ်များကိုသုံးပါ။
ကွမ်တမ်ဂဏန်း ၄ လုံးရှိတယ်။ ၎င်းတို့သုံး ဦး သည်အက်တမ်တစ်ခု၏အီလက်ထရွန်တည်ရှိရာနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စတုတ္ထကွမ်တမ်နံပါတ်သည်အီလက်ထရွန်ဘယ်မှာလဲ၊ မည်သို့ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မပြောပေ။ မင်းဒီအကြောင်းကိုသိပ်မရှင်းသေးဘူးလား။ လုပ်သာလုပ်!
အဓိကကွမ်တမ်နံပါတ် (n) ။ ၎င်းသည်ပတ်လမ်း၏အရွယ်အစားကိုဖြည့်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးနျူကလိယနှင့်အီလက်ထရွန်ကြားအကွာအဝေးကိုညွှန်ပြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ပတ်လမ်းပိုကြီးလေလေအီလက်ထရွန်သည်အက်တမ်၏နျူကလိယမှဖြစ်နိုင်သည်။
Azimuthal သို့မဟုတ်ဒုတိယကွမ်တမ်နံပါတ် (ဌ) ပတ်လမ်း၏ပုံသဏ္န်ကိုဖော်ပြပါ။
သံလိုက်ကွမ်တမ်နံပါတ် ()) ပတ်လမ်း၏ ဦး တည်ရာကိုညွှန်ပြသည်။
ကွမ်တမ်နံပါတ်ကိုလှည့်ပါ (၎) အီလက်ထရွန်ကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်လဲပြောပြပါ။
ကွမ်တမ်နံပါတ်များကိုရယူရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့် ၂ ဆင့်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ကွဲပြားသောအီလက်ထရွန် (ပတ်လမ်းကိုဖြည့်သောနောက်ဆုံးတစ်လုံး) မှကွမ်တမ်နံပါတ်များကိုရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့် ၁ မှစတင်ပြီး electron configuration ကိုရေးပါ။ ဘယ်လိုလဲ? အဲဒါလုပ်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒါကိုရအောင်လုပ်ရအောင်။
ဤပုံကားချပ်သည် Aufbau နိယာမအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ပတ်လမ်းများသည်စွမ်းအင်အစဉ်အလာကိုဖြည့်ပေးကြောင်းကာကွယ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာစွမ်းအင်အနည်းဆုံးရှိသော orbital သည်စောစောအားဖြည့်လိမ့်မည်။
မည်သည့်ပတ်လမ်းတွင်စွမ်းအင်ပိုရှိသည်ကိုရှာဖွေရန်ခွဲစိတ်မှု n + l ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ မတူညီသောအက်တမ်နှစ်ခုအတွက်ဤစစ်ဆင်ရေးသည်တူညီသောဂဏန်းရလာဒ်ရလျှင် n နံပါတ်ပိုမြင့်သောသူသည်စွမ်းအင်ပိုရလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ချည်နှောင်မှုတစ်ခုတွင်အနိမ့်ဆုံးဂဏန်းရှိသော n ကိုပထမဆုံးဖြည့်သည်။ ဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရအောင်။
5s: n + l ->5+0=5ဖြစ်သည်
n + l စည်းမျဉ်း၌အချည်တစ်ခုရှိနေသောကြောင့်၎င်း၏နံပါတ် n သည်နိမ့်သောကြောင့် 4p ကိုစောစောဖြည့်သည်။
ဒီပုံစံအတိုင်းအီလက်ထရောနစ်ပုံစံသတ်မှတ်ချက်ကိုရဖို့မင်းက Periodic table ကိုကောင်းကောင်းသိထားရမယ်။ ငါတို့မှာအက်တမ်အရေအတွက်နဲ့စားပွဲပေါ်မှာဒြပ်စင်ရဲ့တည်နေရာရှိရင်ကိတ်မုန့်တစ်ချပ်ပဲ။
ဤနည်းလမ်းကိုပြီးပြည့်စုံသောအီလက်ထရွန်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရေးသားရန်ခွင့်မပြုသောကြောင့်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဟုယူဆသည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ပါမြင့်မြတ်သောဓာတ်ငွေ့ဒြပ်စင်၏အမည်ကိုကွင်းစကွင်းပိတ်တွင်ရေးနိုင်ပြီး၎င်းမှမွန်မြတ်သောဓာတ်ငွေ့မှလမ်းကြောင်းသို့မေးသောဒြပ်စင်သို့လမ်းကြောင်းကိုရေးနိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်လမ်းကြောင်း (periodic table ၏အတန်း) နှင့်“ zone” တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအီလက်ထရောနစ်ပုံစံသတ်မှတ်မှုကိုရေးပြီးသည်နှင့်ကွမ်တမ်နံပါတ်များကိုထုတ်ယူလိမ့်မည်။
မီးစုန်း (P) ကိုနီယွန်ဟုခေါ်သောအထက်ဓာတ်ငွေ့မှရေးသားလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဇုန်dနှင့်fသည်အထူးဇုန်များဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤနည်းလမ်းကိုသတိထားသင့်သည်။ ငါတို့ခရီးသွားရင်ဇုန် in မှာငါတို့ကအတန်း (အတန်း)၊ ဒါပေမယ့်အနှုတ်နံပါတ်တစ်ကိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဧရိယာ F နှင့်တူညီသည်၊ ငါတို့သည်ကာလ၏နံပါတ်ကိုမထည့်ဘဲကာလအပိုင်းအခြားနှစ်ခုကိုနုတ်မည်။ ဥပမာနှစ်ခုဖြင့်သင်ပိုမိုနားလည်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကာလ ၅ တွင်ရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဇုန် D ၌ရှိနေလျှင် ၁ ကိုနုတ်သည်။
၎င်းသည်ကာလ ၆ တွင်ရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဇုန်fတွင်ရှိနေလျှင် ၂ ကိုနုတ်သည်။
အီလက်ထရွန်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွင်၎င်းတို့ကိုသင်သတိမပြုလျှင်ကြီးမားသော ဦး ခေါင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ထိတ်လန့်မနေပါနဲ့။ ငါတို့မင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။
ဇုန် F သည် periodic table ၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာသော်လည်းဇယား D ၏နောက်ဆုံးအတန်းနှစ်တန်း၏ပထမနှင့်ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းများအကြားအဖြူရောင်၌အမှန်တကယ်ထည့်သွင်းထားသည်။
မင်းမြင်လား? ဤအကြောင်းကြောင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံဇုန် F တွင်ဒြပ်စင်တစ်ခု၏အီလက်ထရောနစ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရေးရန်လိုအပ်သည့်အခါဥပမာ၊ Nd သည်ဇုန် D ၌သက်ဆိုင်သောအဆင့်၌အီလက်ထရွန်တစ်ခုထားရမည်။ ဇုန် F သို့မဝင်မီ
အုပ်စု ၆ နှင့်အုပ်စု ၁၁
အုပ်စု ၆ နှင့်အုပ်စု ၁၁ ကူးပြောင်းရေးသတ္တုများတွင်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးကျည်များ၌ ၄ နှင့် ၉ အီလက်ထရွန်အသီးသီးရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမို၍ တည်ငြိမ်သောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ရန် s s orbital သည်စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီးနောက်ထပ်ပတ်လမ်းတစ်ခုသို့ဖြတ်သန်းသွားသော electron တစ်ခုဆုံးရှုံးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် s ပတ်လမ်းသည်အီလက်ထရွန်တစ်ခုနှင့်ကျန်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အုပ်စု ၆ ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လျှင် ၅ နှင့် ၁၀ ဖြင့်၎င်းသည်အုပ်စု ၁၁ ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လျှင်။
သိသာထင်ရှားသည်မှာဤအရာသည်ငွေ (Ag) ၏အီလက်ထရွန်ပုံစံဖြစ်သည်။ သို့သော် s orbital မှအီလက်ထရွန်ဆုံးရှုံးသောအခါဤပုံပေါ်သည်။
သို့သော်ဤစည်းမျဉ်းတွင်ခြွင်းချက်များရှိသည်၊ ၎င်းသည် s orbital တွင် electron ၂ လုံးနှင့်dorbital တွင် ၄ လုံးကျန်သည်။
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ အတွေ့ရများဆုံး (Cr, Cu, Ag and Au) သည်ဤစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသည်။
မင်းနားလည်လား? အင်း။ အီလက်ထရွန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအကြောင်းသင်သိရန်လိုသည်။ ကွမ်တမ်နံပါတ်များကိုသွားကြစို့။
ကွမ်တမ်ကိန်းဂဏန်းများကိုရယူရန်အနေနှင့်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီ၌အီလက်ထရွန်မည်မျှအံဝင်သည်ကိုသိထားရမည်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင်အီလက်ထရွန် ၂ ခုရှိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
အလွှာ sမရ။ ၎င်းတွင်ပတ်လမ်းတစ်ခုသာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အီလက်ထရွန် ၂ လုံးကိုထိန်းနိုင်သည်။
အောက်ဆုံးက pမရ။ ၎င်းတွင်ပတ်လမ်း ၃ ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အီလက်ထရွန် ၆ ခုအတွက်နေရာရှိသည်။
Lay အလွှာမရ။ ၎င်းတွင်ပတ်လမ်း ၅ ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အီလက်ထရွန် ၁၀ လုံးကိုထိန်းနိုင်သည်။
အောက်ဆုံးက fမရ။ ၎င်းတွင်ပတ်လမ်း ၇ ခုရှိသည်၊ ၎င်းတွင်အီလက်ထရွန် ၁၄ လုံးရှိသည်။
ယခုသင်ပတ်လမ်းတစ်ခုစီတွင်အီလက်ထရွန် ၂ ခုရှိသည်ကိုသင်နားလည်သည်နှင့် Hund ၏စည်းမျဉ်းကိုသင်သိသင့်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းကဥပမာ sublevel (သို့) shell ၏ပတ်လမ်းများကိုဖြည့်သောအခါဥပမာ p shell သည်အီလက်ထရွန်များကိုပတ်လမ်းတစ်ခုအားအကောင်း (positive) နှင့်အခြား (အနုတ်) တွင်ဖြည့်ပေးသည်။ မင်းအဲဒါကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ချင်လား။
ငါတို့မှာ 2p ရှိရင်4ဆိုလိုသည်မှာအီလက်ထရွန် ၄ လုံးပါသော 2p ပတ်လမ်းသည်ဤကဲ့သို့ဖြည့်မည်မဟုတ်။
သင်ရနေပြီလား။ ကောင်းပြီ၊ ဂဏန်းတွေကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။
ကွမ်တမ်နံပါတ် n ဤနံပါတ်သည်အီလက်ထရွန်ပုံစံ၏နောက်ဆုံးအဆင့်၏နံပါတ်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီလက်ထရွန်ဖွဲ့စည်းမှုသည် 4s နှင့်အဆုံးသတ်လျှင်2အဓိက quantum နံပါတ်သည် ၄ ​​ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကွမ်တမ်နံပါတ် l ဤနံပါတ်သည်ဖြည့်ထားသောနောက်ဆုံးအလွှာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အောက်ဆုံးက p -> l = 1
အလွှာd-> l = 2
အလွှာf-> l = 3
ကွမ်တမ်နံပါတ် m ဂဏန်း m သည် -l မှ + l အကြားမည်သည့်တန်ဖိုးမဆိုဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကွဲပြားသောအီလက်ထရွန် (s, p,dသို့မဟုတ် f) ပေါ်မူတည်သည်။ ဒီဂဏန်းတွက်နည်းကနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဲဒါကိုပုံနှစ်ပုံနဲ့ကြည့်ရအောင်။
Layer s -> ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်း l က0နဲ့တန်တာမို့ m က0လောက်ပဲရှိနိုင်ပါတယ်။
Layer p -> l သည် ၁ တန်ဖိုးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် m သည် -1, 1 သို့မဟုတ်0ဖြစ်နိုင်သည်။
Layerd-> l သည် 2, ထို့ကြောင့် m သည် -2, -1, 0, 1 နှင့်2ဖြစ်နိုင်သည်။
အလွှာf-> l သည် ၃ နှင့်တန်သည်၊ ထို့ကြောင့် m သည် -3, -3, -2, 1, 0, 1 နှင့်2ဖြစ်နိုင်သည်။
ပတ်လမ်းများမည်သို့ဖြည့်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကွမ်တမ်နံပါတ် m သည်နောက်ဆုံးဆွဲသောအီလက်ထရွန်ဖြစ်သည့်အပေါက်၏တန်ဖိုးရှိသည်။ ဒီဥပမာကိုမင်းအရင်ကမှတ်မိသေးလား။
p case (1 orbitals) တွင် electron3လုံးရှိလျှင် m သည် -4 ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကွမ်တမ်နံပါတ် sမရ။ ကွမ်တမ်နံပါတ် s သည်½နှင့်-½သာရှိနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအီလက်ထရွန်ဆွဲသောအရာသည် positive ဖြစ်လျှင်မြှားသည်တက်ပြီး s သည် worth တန်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပတ်လမ်းကိုဖြည့်ရန်နောက်ဆုံးအီလက်ထရွန်သည်အနုတ်ဖြစ်လျှင်၊ အောက်သို့ညွှန်ပြသောမြှားဖြင့် s သည်½ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးကအချက်အလက်တွေအများကြီးဆိုတာငါတို့သိပြီးသားပါ၊ ဒါပေမယ့်မင်းဥပမာအချို့နဲ့ပိုနားလည်လိမ့်မယ်။ သွားပြန်ပြီ!
ဆယ်လီနီယမ် (Se) -> အနုမြူနံပါတ်: ၃၄
ကျွန်ုပ်တို့သည်အီလက်ထရွန်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရေးသည်။ s, p,dနှင့်forbitals ၂ ခု၊ ၆၊ ၁၀ နှင့် ၁၄ တွင်အီလက်ထရွန်များအသီးသီးရှိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ Moeller ပုံတွင်အီလက်ထရွန်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးနေသည်။ ထပ်ကိန်းအဖြစ်ရေးထားသောအီလက်ထရွန်အရေအတွက်ကိုပေါင်းခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရေးသည်။
4p ပတ်လမ်းသည်မပြည့်သောကြောင့်အီလက်ထရွန်များသည် ၃၆ အထိပေါင်းလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 36p ကိုမထည့်ပါ6ဒါပေမယ့် 4p4.
ငါတို့ကွမ်တမ်နံပါတ်တွေကိုထုတ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါတို့ကပတ်လမ်းကိုဖြည့်ပေးတဲ့နောက်ဆုံးအီလက်ထရွန် (valence) ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားတဲ့အီလက်ထရွန် (electron) ကိုကြည့်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ငါတို့သည် 4p ကိုကြည့်မည်4.
အဓိကကွမ်တမ်နံပါတ် ဖြည့်ရန်နောက်ဆုံးစွမ်းအင်အဆင့်သည် ၄ ​​ဖြစ်သည်။
= = ၄
ဒုတိယမြောက်ကွမ်တမ်နံပါတ် ဖြည့်ရန်နောက်ဆုံးစွမ်းအင် sublevel သည် p orbital ဖြစ်သည်။
l = ၁
သံလိုက်ကွမ်တမ်နံပါတ်။ ငါတို့သည်အီလက်ထရွန်များကိုဆွဲလျှင်နောက်ဆုံးဖြည့်ရန် p shell ၏ပထမဆုံးပတ်လမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကွမ်တမ်နံပါတ်ကိုလှည့်ပါ။ p orbital ကိုသိမ်းပိုက်ရန်နောက်ဆုံးအီလက်ထရွန်တွင် down arrow ရှိသည်။
ရွှေ (Au) -> [Xe] 6s14f145d10
အဓိကကွမ်တမ်နံပါတ် -> ဎ = 5
အလယ်တန်းကွမ်တမ်နံပါတ် -> l = ၁
သံလိုက်ကွမ်တမ်နံပါတ် -> m = ၂
ကွမ်တမ်နံပါတ်လှည့်ပါ -> s = -½
ဒါပါပဲ! အခုကမင်းအလှည့်လား၊ မင်းအီလက်ထရွန်ပုံစံကိုပြင်ပြီးအောက်ပါဒြပ်စင်တွေရဲ့ကွမ်တမ်ဂဏန်းတွေကိုရနိုင်မလား။
Cr(24), Rb(37), Br(35), Lu(71), Au(79)
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » ကွမ်တမ်နံပါတ်များ